Ezinamacala wocingo Factory | KwiChina Iingcingo eziMbi zenziwe ngocingo abavelisi, Abaxhasi
PVC gauge wawutyabeka 2 × 4 ...
electro iqaqanjiswa welding w ...
hot nkxu welding kwalenza
304 / 304l / 316 / 316l 11 umnatha s ...
Ibhanki yomlambo i1x1x2 ephothiweyo gabi ...
China mveliso 8 Iinyawo Chicken wocingo kwalenza ezinamacala ucingo enemingxuma yaziwa ngokuba ucingo chicken, inkukhu ucingo inetha, ezinamacala ucingo umnatha kunye hex wocingo. Olu hlobo locingo olunamacala olukiweyo lwenziwe ngocingo lwentsimbi, ucingo oluphantsi lwekharbon yentsimbi, okanye ucingo lwentsimbi olungenasici, emva koko lwenziwa kwalenza. Kukho iindlela ezimbini zentsimbi: Umnatha wocingo osindayo ongasetyenziswanga ungasetyenziselwa ucingo lweenkuku, ucingo lomvundla, irockfall netting kunye ne-stucco mesh, hea ...
1 Inkukhu Iinkukhu umnatha 6 X 150 Chicken wocingo Isefu ezinamacala ucingo enemingxuma yaziwa ngokuba iinkuku ucingo, inkukhu ucingo inetha, ezinamacala ucingo umnatha kunye hex ucingo enemingxuma. Olu hlobo locingo olunamacala olukiweyo lwenziwe ngocingo lwentsimbi, ucingo oluphantsi lwekharbon yentsimbi, okanye ucingo lwentsimbi olungenasici, emva koko lwenziwa kwalenza. Kukho iindlela ezimbini zentsimbi: Umnatha wocingo osindayo osetyenzisiweyo unokusetyenziselwa ucingo lwenkuku, ucingo lomvundla, irockfall netting ...
Strong Chicken Wire Hex wocingo kwalenza ezinamacala wocingo yaziwa ngokuba ucingo chicken, inkukhu ucingo inetha, ezinamacala ucingo umnatha kunye hex wocingo. Olu hlobo locingo olunamacala olukiweyo lwenziwe ngocingo lwentsimbi, ucingo oluphantsi lwekharbon yentsimbi, okanye ucingo lwentsimbi olungenasici, emva koko lwenziwa kwalenza. Kukho iindlela ezimbini zentsimbi: Umnatha wocingo osindayo osetyenzisiweyo unokusetyenziselwa ucingo lwenkuku, ucingo lomvundla, irockfall netting kunye ne-stucco mesh, heavyweig ...
22 Gauge Chicken Wire Isefu ezinamacala Netting Chicken enemingxuma Roll
Isefu ezinamacala wocingo 13mm Chicken Wire elenze i
Isefu ezinamacala wocingo yaziwa ngokuba yintambo yenkuku, inkukhu yocingo, i-hexagonal wire mesh kunye ne-hex wire mesh. Olu hlobo locingo olunamacala olukiweyo lwenziwe ngocingo lwentsimbi, ucingo oluphantsi lwekharbon yentsimbi, okanye ucingo lwentsimbi olungenasici, emva koko lwenziwa kwalenza. Kukho iindlela ezimbini zentsimbi: Ezingasetyenziswanga wocingo kwalenza ingasetyenziselwa ucingo inkuku, ucingo umvundla, rockfall iminatha kunye stucco enemingxuma, heavyweight ucingo umnatha isetyenziselwa gabion ba ...
Isefu enamacala wocingo
Isefu ezinamacala wocingo yaziwa ngokuba yintambo yenkuku, ukubiya kwenkukhu, ucingo olunamacala kunye ne-hex wire mesh. Olu hlobo locingo olunamacala olukiweyo lwenziwe ngocingo lwentsimbi, ucingo oluphantsi lwekharbon yentsimbi, okanye ucingo lwentsimbi olungenasici, emva koko lwenziwa kwalenza.